Home Wararka Dhibaatooyinka Ka dhasahy Soo Noqoshadii Fahad Yasiin “ Taliyaha Labada Aag”
Muddadii uu dalka ka maqnaa Fahad Yasiin waxyaabo badan oo horumar ah ayaa dalka ka qabsoomay oo ay ugu horeysay doorashadii HirShabeelle, Dacwadda Ikraan oo aad u soo kortay, Fahad oo laga xayuubiyey xilka NISA iyo Xundubey oo laga xooray Wasaaradda Amniga oo uu maqaarsaar ku ahaa balsa la liiclicaya awoodda iyo aqoonta ay hay’adaas u baahan tahay oo ka maqan awgeed.
Farmajo waxaa u muuqatay in haddii sidaan lagu sii socdaa uu dalka gaari doono meel uu cagajiisa isku taago oo doorasho xor ah ay qabsomi doonto, taas oo keeni doonta in dacwada Ikran si sax loo furo dambigana ciddii gashay qoorta loo suro iyadoo ay dhici karto in Farmajo lagu qaado is hortaag cadaaladeed.
Guud ahaan haddii doorashadu si sax ah u dhacdo waa dhaawac weyn oo soo gaaray Farmajo iyo Fahad oo waxaa loo qabsan doonaa dhammaan gabood falladii kibirka iyo diin la’aanta loo galay muddadii 4 ta sano iyo bilaha ahayd ee ay hogaanka dalka hayeen.
Si haddaba taas loo hor istaago waxaa uu dadaal iyo dagaal adag Farmajo u galay inuu Fahad soo galo dalka maadaama uu yahay qof sameeya waxa kasta oo uu ku gaari karo waxa uu rabo haddii ay tahay xoog, handadaad ama dil iyo haddii ay ahaan lahayd baryo iyo is dulleyn jilbaha la qabsado cidda wax laga rabo.
Maxaa dhacay Markii uu Soo galay Fahad?
Fahad oo lagu naaneyso Talaiyaha labada aag isla markii uu soo noqday waxaa dhacay:
Ilaa 7 Qarax ayaa la abaabulay oo ay dad ku dhinteen waa hawlaha taliyaha labada aag.
Gabar laga baqay inay Marqaati dacwadda Ikran ka noqoto Hibaq Abukar oo la khaarijyey.
Doorashadii Hirshabeelle oo la qaban la’ayahay xubnihii dhinnaa oo uu dab ku shiday.
Doorashadii G/Waqooyi (Somaliland) oo uu hadda lugta ku dhuftay si loo burburiyo heshiiskii arintaas laga gaaray oo wada gaareen RW Rooble iyo Ku Xigeenkiisa iyo Guddoomiye Cabdi Xashi.
Haddaba dadka Somaliyeed ee weli raja ka qaba inay dalka doorasho ka dhici karto inta uu Farmajo Villa Somaliya fadhiyo iyo inta uu Fahad xor yahay waxay u baahan yihiin inay dib u fekeraan oo xisaabtamaan isna barbar dhigaan labadii toddobaad ee Fahad maqnaa horumarka laga gaaray arrimaha cakiran iyo sida uu hadda u kala riday maalmo yar oo uu dalka ku sugnaa. Ogaada awoodda la siiyey Fahad waa ka adag tahay tii hore waxaanu khatar gelin karaa dad badan haddaan laga hortagin.
Dambiyada waxaa qeyb ku yeelanaya oo waqtigooda lagu xisaabin doonaa Cabdiraxman Dheere iyo Qooryooley iyadoo Qoorqoorna ay tahay inay reer Galmudug ka fiirsadaan inuu bohola ku sii hogaamiyo. Sidaas darted Waxaa kaliya ay doorasho xor iyo xalaal ka dhici kartaa dalkaan in:
Farmajo la geliyo xabsi guri taas oo ah laba badbaado mid naftiisa ah oo maanta cidkasta waa u ciil qabtaa, waan ala dili karaa iyo mid qaranka dantiisa ah si doorasho xalaal ah ay dalka uga dhacdo.
Fahad Yasiin waa in Maxakamd la horgeeyo oo loo maxkamadeeyo si cadaalad dambiyada faraha badan ee lagu tuhmayo lana sii daayo haddii lagu waayo ama loo qabsado wixii lagu helo.
Waxaan labadaas ah ahayn waa waqti lumis iyo dibindaabyo dalka lagu wado si uu uga haro waddamada geeska oo xawli degdeg ah oo horumar ah hadda ku socda.